makonye drive gearbox, worm gear bhokisi musangano, worm gearbox
worm anofambisa gearbox gearmotor mugadziri
Honye Gear Set
Yedu honye inotyaira gearboxes inoburitsa chakaburitsa torque inosvika 420Nm uye mazhinji mamodheru anoratidza ne -30 arc-maminitsi ekudzokera shure. Kutsvaga Aluminium Worm Gearboxes?
Diki gonye bhokisi
Isu tine gonyeti chinomhanyisa kumhanyisa madzoka kuti muite zvamunoda. Kukurumidza kutumira uye zvemahara gonye bhokisi kubva Torque Kuendeswa. Sarudza iyo yakakodzera worm drive gearbox kune yako purojekiti.
Worm gear bhokisi musangano
Iine yekumhanyisa kumhanya ye1000 kana 1500RPM, zvichibva pahupenyu bvunzo, mapfumbamwe honye giya yekumhanyisa chinodzora inowanikwa mune 26 furemu saizi ine zviyero kubva pa5: 1 kusvika 60: 1. kukurumidza kudzikisira gearbox uye honye giya bhokisi bhokisi.
Sogears 'worm kutyaira gearbox iri kunyanya muAluminium Alloy, kune rimwe honye giya rakaiswa.
honye gearbox inowana yakakwira kukurumidza kuderedza ratios kubva
3: 1 gearbox kuenda kumusoro, isu tinemutengo wakaderera wehonye giya bhokisi gungano kubva kumugadziri, kune diki honye gearbox uye rakakura giya, magiya ehonye mudzimba akagadzirwa neTin (Stannum) Bronze, hombe huwandu hweyakajairwa & yakakosha magiya giya. seti, Right Angle Cast Iron worm giya rinodzora, Varitron worm giya rinodzora akateedzera akateedzera base pamakore mazhinji ezviitiko anoshandisa akagadzirwa mazino kumusoro neasinga pfuuridzwe torque kuchinjisa kuita.
Worm giya kumhanya rekudzora
Worm kutyaira gearbox
Worm drive mota
Compact honye gearbox
Hunhu hwehonye inofamba
Iko kusakosha kweiyo honye kutyaira kwakafanana nekumwe kutapurirana kwegear (zvakagadzirirwa kudzikisira) ayo zvakare mafomu sekukanda, kupfeka, kunamira kwezino uye kupwanya kwehonye giya mazino. Pakati pavo, pitting uye honye giya zino pamusoro rakapfekerwa ndizvo zvakajairika. uye kunamatira kunoitikawo dzimwe nguva. Kukanganisa kuri pamusoro kunoitika kunyanya nekuti hama yehonye inotyaira gearbox ine mota kumhanya pakati peye meshing parutivi zviso zvakakura, kunyanya muiri cylindrical honye dhiraivha, iyo lubrication angle 8 idiki kwazvo, uye iyo yakasimba yekumanikidza mafuta firimu haigone kuumbwa, kuitira kuti iyo kufambisa kunyatsoshanda kuri kudzikira kana tembiricha yakwira.
Tine pamusoro pe100 inyanzvi ye worm drive gearbox technical design mainjiniya kuti ave nechokwadi chekuti isu tinogona kupa mhinduro kwayo kune zvisingaenzanisike zvikumbiro. Kunze kwemhando dzakajairika dzehonye gear bhokisi kusangana, tinokwanisawo kupa service yakagadzirirwa zvinoenderana nezvaunoda chaizvo.
Isu tinopa ese emakambani emabhizimusi ane akadzika dunhu zivo uye chinangwa-chakavakirwa zvishandiso chakagadzirirwa honye drive mabhokisi ekuti uite zvaunoda.
Kune vashandisi vekupedzisira, Kana iwe uchida yakakwana, yakabatana uye inoshanda indasitiri yekutapira mhinduro, ndapota uyai kwatiri;
Kune vatengesi, kana iwe uchida mugadziri akavimbika nehunhu hwakanaka uye sevhisi yakakwana, tapota uyai kwatiri.
20 + Makore
Yakakwira Performance kune Akawanda maindasitiri, iine Zero backlash Gear kugadzira yakakwira uye yepamusoro kuitira kuti udzikise mutyairo wako wekutyaira.
Sogears inopa akasiyana siyana masevhisi ekupa kweTransmission & Distribution vatengi. Tarisa uone edu honye giya anodzora ayo ari kunyanya.
Sogears inopa yakakwirira mhando worm drive giya bhokisi, worm dhiraivha nemotokari, Kuvandudzwa uye hwakawedzerwa hupenyu, Boka redu rebasa rinogadzira iro rakanakisa gonye bhokisi bhokisi musangano musangano.
Tine timu yakanyanya kutsenga yekutenga yekuchengeta yakakwira mhando yezvikamu zvakadai sekubereka, zvisimbiso zvemafuta, screws nezvose zvakanaka uye mutengo wemakwikwi.
Isu Tinofara Kukurukura Newe chero nguva.